ओलीले मोदी भ्रमणमा देखेका उपलब्धिहरु, कहाँ गए त आजसम्मका उपलब्धिहरु ? | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > राजनीति > ओलीले मोदी भ्रमणमा देखेका उपलब्धिहरु, कहाँ गए त आजसम्मका उपलब्धिहरु ?
ओलीले मोदी भ्रमणमा देखेका उपलब्धिहरु, कहाँ गए त आजसम्मका उपलब्धिहरु ?
वैशाख ३०, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण उपलब्धीपूर्ण र नेपालको पक्षमा भएको बताएका छन् । ३ वर्ष अघि तनावपूर्ण रहेको दुई देशको सम्बन्ध अहिले नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको र बराबरीको हैसियतमा अगाडि लैजाने वातावरण बनेको बनाए ।
यो असल छिमेकीपनका लागि उपयुक्त छैन । भारतको सीमानामा आफ्नो जमिनको बचाउका लागि हाम्रो जमिन, बस्ती, खेती डुवानमा पार्नु बान्छनिय हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्न दुबै तत्पर भएका छन् ।
हामी त तत्पर हुने नै भयो । भारत पनि तयार भएको छ । यो वर्ष अगाडि नै कार्यदल बनाएर समस्याग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र कहाँकहाँ कलभर्ट बनाउन सकिन्छ, प्राकृतिक रुपमा नै पानी पठाउन सकिन्छ गर्ने भनिएको छ ।
खनालले दिए प्रहरी प्रशासनलाई यस्तो चेतावनी ! भने-‘एसपि, डिएसपी ,एसएसपी कसैलाई छाड्दिन’
कांग्रेसको इतिहास राखेका शिखर पुरुष स्व. कोइरालाको आठौं स्मृति दिबस आज ! किन चुके कांग्रेस ?पढ्नुहोस